umatshini wombane wegrisi yenkukhu yokutya kwenkukhu,ukutya kwenkukhu,ukutya kweenkomo
Umthamo:1000~ 1500kg / h
Umatshini wombane wombona wombhoxo sisando sokuxhuma isetyenziselwa ukuqhubekisa inkukhu ukutya okuziinkozo kwiincinci ezinobukhulu obufanelekileyo ukunceda enye inkqubo. Kwaye siyingcaphephe ekuyileni nasekuveliseni oomatshini bokuphaya iinkozo ngeenketho zakho.Omatshini wokugaya umbona wenziwe ngehipper hopper, ibhloko yenjini ephezulu, ibhloko yenjini esezantsi, irola, sisa, ukusebenza fan, umbhobho wokuhambisa ukutya, njl. Kwaye ibhegi yokugcina kunye nomgqomo wokugcina unokuxhotyiswa njengoko kufuneka abasebenzisi. Ngaphandle koko, sikwabonelela abanye oomatshini ababini bokugaya izithako zokutya
Iimpawu zoMbane weKhonkrithi yoMatshini
1.le grunt yenkukhu yokudlula inesicelo esibanzi. Iindidi ezahlukeneyo zezinto ezingafunekiyo zinokutyunyuzwa, njengengqolowa, umbona, irayisi, isoya, umhlaba, I-millet okanye ezinye izinto eziqinileyo ezinje ngethambo, inyama eyomileyo kunye nokunye.
2. le grower yombona yombane yamkelwe ngesakhiwo esilula kunye noyilo oluphezulu.
3. Lo matshini we grinder yomatshini usebenza ngempumelelo ephezulu, kulula ukusebenza, ukusebenza okuzinzileyo.
4. Umbane wokutya wombane wesando unokusetyenziswa kwisityalo sokutya sepellet, isilwanyana kunye nenkukhu sitya ipellet isityalo, I-fiberboard, ibhodi yokuxinana ephezulu, imveliso yamaphepha, njl.
5. Umatshini wethu wokutya wombane wokudibanisa ukutya wenziwe nge-hopper yokondla, irola, sieves, uyilo fan, igumbi lokutyumza nesixhobo sokuhambisa.
Umgaqo wokuSebenza weKhonkrithi yeNdawo yoMbane
Izinto eziluhlaza zingena kwigumbi lokutyumza ngokutyisa i-hopper kwaye emva koko zichotshozwe ngesantya esiphezulu ijikeleza isando. Izinto eziluhlaza ngokukhawuleza zichotshozwe kwiincinci ezincinci phantsi kwesitayile esiqhubekayo, khwela kwaye ubethe ngesando, iplate enamanzi kunye neziqwenga zesikrini. Emva koko izixhobo ezityhoboziweyo ziya kuthunyelwa ukuba zidlule kwimingxunya yesikrini. Amasuntsu amakhulu angenakudlula kwimingxunya yesikrini kufuneka ephinde atshitshiswe.
Ulondolozo loMxhaso loNcedo lukaMbane kunye nokuCombulula iingxaki
☑ Sebenzisa umatshini wokugcina umbona ngokulandela ngqo imiyalelo. Ukujonga kunye nokucoca umatshini ngolwahlobo ngalunye.
Coca ngaphakathi nangaphandle komatshini ngexesha lokuphumla, Ukuthintela i-grinder ukuba i-rusty okanye i-mesh yesungk ivimbe.
Ha Guqula ngakumbi kwaye ubeke endaweni yazo izinto ezingasasebenziyo ukuba zaphuke okanye zambethe kakhulu.
☑ Jonga ukuqina kwebhanti yenxantathu ngalo lonke ixesha iqala. Ukuguga kwebhanti kuya kuchaphazela ukusebenza kwegwele lokugaya.
Yinto eqhelekileyo ukuba ubushushu bubuthwale (hayi ngaphezulu kwe-25 ℃ ) emva kokuba lo matshini wokugaya umbona usebenza ixesha elithile. Ukuba ubushushu bude buye 60 izidanga, kubonakalisiwe ukuba oku kudala kugugile, emva koko abathengi mabayeke ukuyibuyisela okanye bayicoce.
Ukuchazwa komatshini wokucoca umbane ngombane
Umboniso womatshini wokugaya umbona